Iyo JingPad A1 inoratidza muvhidhiyo kuti ichakwanisa sei kumhanyisa Android maapps | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yezhizha rapfuura, imwe yenyaya dzinopisa maererano ne Hardware ine kana yeLinux yaive iyo PineTab. Vamwe vedu takafunga kuti ichi chichava sarudzo, nekuti masisitimu anoshanda ayo aanogona kumhanya ari padhuze nezvatinoshandisa pamatafura, asi mwedzi yakawanda gare gare, kana software kana Hardware zvinoita senge zviri nani. Gore rino pane zvakawanda kutaura nezveimwe piritsi, one JingPad A1 izvo zvinoita sekunge zvinosangana nezvose zvinodiwa kuti uve hwendefa iro wese mushandisi weLinux anogona kurota nezvaro.
Uye ndeyekuti iyo JingPad A1 haisi iyo PineTab. Yake uzivi haisi yekuti zvese zvakasununguka, kusanganisira Hardware, asi izvo inonyepedzera kuva Linux piritsi ine nyama yese pane iyo grill, kusanganisira zvimwe zvigadzirwa zvemberi. Uye kana uine Linux pahwendefa, kuti zvese zvinoshanda nemazvo uye zvikamu zvakaita semhando yemakera zvaive zvisina kukwana, nhasi vaburitsa vhidhiyo nyowani mu yepamutemo chiteshi cheprojekiti izvo zvinokwezva kutarisisa uye matinoona maitire ayo maapplication eApple sekunge aive emuno maapp.
JingPad A1: Linux uye Android mune piritsi ine advanced hardware
Zvavanosarudza pakuratidzira kupfupi mutambo weGarden Scapes, iyo ini yandakanga ndisingazive ini asi zvinoyeuchidza nezveCandy Crush. Kubva pane vhidhiyo, chatinofanira kuchengeta ndechekuti iyo Android application inowanikwa pachiratidziro chemusha sekunge yaive yemuno, izvo uye izvo zvinoita sekushanda chaizvo. Uye chinhu ndechekuti munyika yeLinux mune software yakawanda, asi zvimwe zvinoshandiswa zvakanyatsogadzirirwa nharembozha ine touch skrini inokodzera piritsi zvirinani.
Iyo yekudzikira yezvose izvi ndeyekuti iyo piritsi inodarika € 600, uyo hausi mutengo wakakwira kana tichizoushandisa, asi wakanyanya kukwirira kuutenga nechido. Ah, uye Android rutsigiro inongowanikwa mune yeJingOS vhezheni yeJingPad. Tichifunga zvese zvarinopa, zvichakwanisa kukwikwidza zvakatarisana neipad?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Iyo JingPad A1 inoratidza muvhidhiyo maitiro aunogona kumhanyisa maapplication eApple